sīla – Page2– Dhammadīpa
Wholesome or Unwholesome
Posted on 24 Dec 2016 by Ashin Sopāka
The king said: ‘Which, Nāgasena, is there more of, merit or demerit?’
‘He who does wrong, O king, comes to feel remorse, and acknowledges his evil-doing. So demerit does not increase. But he who does well feels no remorse, and feeling no remorse gladness will spring up within him, and joy will arise to him thus gladdened, and so rejoicing all his frame will be at peace, and being thus at peace he will experienceablissful feeling of content, and in that bliss his heart will be at rest, and he whose heart is thus at rest knows things as they really are. For that reason merit increases. A man, for example, though his hands and feet are cut off, if he gave to the Blessed One merelyahandful of lotuses, would not enter purgatory for ninety-one Kalpas. That is why I said, O king, that there is more merit than demerit.’
‘Very good, Nāgasena!’ – Mil 3.7.7
Rājā āha—“bhante nāgasena, kataraṁ nu kho bahutaraṁ puññaṁ vā apuññaṁ vā”ti? “Puññaṁ kho, mahārāja, bahutaraṁ, apuññaṁ thokan”ti. “Kena kāraṇenā”ti? “Apuññaṁ kho, mahārāja, karonto vippaṭisārī hoti ‘pāpakammaṁ mayā katan’ti, tena pāpaṁ na vaḍḍhati. Puññaṁ kho, mahārāja, karonto avippaṭisārī hoti, avippaṭisārino pāmojjaṁ jāyati, pamuditassa pīti jāyati, pītimanassa kāyo passambhati, passaddhakāyo sukhaṁ vedeti, sukhino cittaṁ samādhiyati, samāhito yathābhūtaṁ pajānāti, tena kāraṇena puññaṁ vaḍḍhati. Puriso kho, mahārāja, chinna­hattha­pādo bhagavato ekaṁ uppalahatthaṁ datvā eka­navuti­kap­pāni vinipātaṁ na gacchissati. Imināpi, mahārāja, kāraṇena bhaṇāmi ‘puññaṁ bahutaraṁ, apuññaṁ thokan’”ti.
မိလိန္ဒမင်းသည် “အရှင်ဘုရားနာဂသေန ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လည်းကောင်း အကုသိုလ်မကောင်းမှုသည်လည်းကောင်း အဘယ်ကများပြားပါသနည်း” ဟုမေးလျှောက်၏ မင်းမြတ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ကားများပြား၏၊ အကုသိုလ်မကောင်းမှုသည်နည်းပါး၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပါနည်း ဟု (လျှောက်၏)၊ မင်းမြတ် အကုသိုလ်မကောင်းမှုပြုသော သူသည်ကား ငါသည် အကုသိုလ်မကောင်းမှုကံကို ပြုမိပြီဟု နှလုံးမရွှင်ခြင်းဖြစ်၏၊ ထိုသို့ စိတ်မကြည်ဖြူ နှလုံးပူသောကြောင့် အကုသိုလ်မကောင်းမှုသည် မတိုးပွါး။ မင်းမြတ် ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ပြုသောသူသည်ကား ပူပန်မှု မရှိ၊ ပကတိ အေးမြ စိတ်ရွှင်ပျသူအား ဝမ်းမြောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်၏၊ ဝမ်းမြောက်သူအား နှစ်သိမ့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်၏၊ နှစ်သိမ့်သော စိတ်ရှိသူ၏ ကိုယ်သည် ငြိမ်းအေး၏၊ ငြိမ်းအေးသော ကိုယ်ရှိသောသူသည် ချမ်းသာကို ခံစား၏၊ ချမ်းသာသောသူ၏ စိတ်သည် တည်ကြည်၏၊ တည်ကြည်သောသူသည် ဟုတ်မှန်သောအတိုင်းသိ၏၊ ထိုအကြောင်းကြောင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည် တိုးပွါး၏။ မင်းမြတ် လက်ခြေပြတ်သော ယောကျာ်သည် မြတ်စွာဘုရားအား တခုသော ကြာလက် ကြာခိုင်ကို ပေးလှူ၍ ကိုးဆယ့် တကမ္ဘာပတ်လုံး ဖရိုဖရဲ ပျက်စီးကျရောက်ရာ အပါယ်ငရဲသို့ အရောက်ရလတ္တံ့၊ မင်းမြတ် ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည် များပြား၏၊ အကုသိုလ်မကောင်းမှုသည်နည်းပါး၏ဟု ငါဆို၏။
Zebra Dove ©Ashin Sopāka 2016
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, morality, sīla
Fragrant Flowers Fragrant Virtue
Posted on 12 Oct 2016 by Ashin Sopāka
“Likeabeautiful flower full of color but without fragrance,
“Likeabeautiful flower full of color and also fragrant,
even so, fruitful are the fair words of one who practices them.” – Dhp 51 & 52
“အဆင်းသာရှိ၍ အနံ့မရှိသောတင့်တယ်လှပသော (ပေါက်ပွင့်စသော) ပန်းသည် ပန်ဆင်သူအား အနံ့တည်းဟူသော အကျိုးကို မဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ ကောင်းစွာ ဟောကြားတော်မူအပ်သော (ပိဋကတ်) စကားတော်သည် မလိုက်နာ မကျင့်ကြံသူအား အကျိုးကို မဆောင်နိုင်။
“အဆင်း အနံ့ ပြည့်စုံ၍ တင့်တယ်လှပသော စံပယ် စကား စသောပန်းသည် ပန်ဆင်သူအား အနံ့တည်းဟူသော အကျိုးကို ဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ ကောင်းစွာ ဟောကြားတော်မူအပ်သော (ပိဋကတ်) စကားတော်သည် လိုက်နာကျင့်ကြံသူအား အကျိုးကို ဆောင်နိုင်၏။”
Little White Flower ©Ashin Sopāka 2016
Posted in Dhamma	| Tagged buddha, dhamma, sīla, virtue